Accueil > Gazetin'ny nosy > Kidnapping – Ambatofinandrahana : Aiza Razanamahasoa Christine ?
Tao anatin’ny 20 andro izay dia “kidnapping” in-droa miatoana no nitranga tany Ambatofinandrahana. Toa ny tany tsy misy mpitondra fanjakana mihitsy ity distrika ity. Mahagaga ihany ny fihetsik’i Razanamahasoa Christine izay filohan’ny antenimierampirenena avy any satria ny Randriambe Ampanjaka Jesy Rabelaolao izay manaja ny fiaraha-monina sy manaja ny fomban-drazana sy manao ezaka ny hahatsara ity distrika ity no namoriana OMC (organe mixte de conception) polisy sy zandary ary miaramila, ka nosakanina tsy hiditra ny tanindrazany niaraka tamin’ny fianakaviany sy ireo ampanjakana avy any Vohipeno sy Ikongo ( Jereo gazety 22 novambra 2021 pejy faha 11, sy akom-baovao an-tsary pejy faha-12 ny volana novambra 2021 teo.
Ny alahady faha 16 janoary 2022 teo, tao amin’ny kaominina Amboropotsy ao dia nanao takalonaina (kidnapping) mpampianatra roalahy ny dahalo. “Surveillant Général” ao amin’ny CEG Amboropotsy antsoina hoe Marcel ny iray, ary mpampianatra ao amin’ny CEG Ambalahambana ny faharoa . Teny an-dàlana dia nataon’ireo dahalo takalonaina izy roalahy ireo. Ny talata faha 18 janoary 2022 vao navelan’ireo mpanao takalonaina rehefa avy nandoa ny vola nasainy tsy maintsy efaina.
Ny voalohan’ny taona 2022 koa dia mbola nisy olona roa hafa tratran’ity takalonaina ity tany amin’ny toerana ity ihany. Solofo sy Masy no anaran’izy roalahy ireo izay sady mpiasa vato no mpamboly ihany koa. Nandeha môtô izy ireo no tratran’ny takalonaina izany koa. Voalaza fa volabe manapitrisany ihany koa no sandan’ny famotsorana azy.
Mahagaga fa valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety no nataon’i Razanamahasoa Christine aty Antananarivo ny zoma faha 21 janoary 2022 teo tao Tsimbazaza, izay mangataka amin’ny mpitondra fanjakana indray ny mba hijerena akaiky io raharaha “Kidnaping” io. Moa ve tsy mpitondra fanjakana izy amin’ny maha Filoha ny Andrimpanjakana azy, no izy indray no miangavy ? Aiza ny OMC no tsy ampandraisina andraikitra to any natao tamin’ny ny raharaha Randriambe Ampanjaka Jesy Rabelaolaoa izay nosakaniny ny alahhady faha 21 novambra 2021 iny?
Matahotra sy mihorohoro mafy ny vahoaka any Ambatofinandrahana noho izany satria olona indray izao no lasa solon’ny omby alain’ny dahalo.